Strollers Hauck: विश्वसनीयता, गुणवत्ता र कार्यक्षमता
अर्थात्, बच्चाहरु - strollers Hauck विनिर्माण कि जर्मन ब्रान्ड, सबै भन्दा कमजोर उमेर समूहको लागि उत्पादनहरु को एक अग्रणी निर्माता हो। को विश्वसनीयता र निर्मित उत्पादनहरु को गुणवत्ता धन्यवाद, यो ब्रान्ड संसारभरि आदर पनि जितेको छ। मात्र प्रतियोगिहरु को एक विशाल संख्या बीच कम्पनी आफ्नो उत्पादन मा डिज्नी तस्बिरहरू प्रयोग गर्न इजाजतपत्र छ।
कम्पनी को इतिहास मा भ्रमण
अब ज्ञात व्हीलचेयर उत्पादन कि ब्रान्ड, - Hauck एकदम ऊबड र यसको गठन preceded कि लामो यात्रा हो। यस कम्पनीको संस्थापक, फेलिक्स जसको परिवार wickerwork मा विशेष छ Hauck, भयो। मूलतः, 1923 मा फिर्ता, यो परिवारका सबै शक्ति बुनाई र उत्पादनहरूको बिक्री उद्देश्य थिए। पाउला छोरी धेरै दशकहरु पछि परिवार व्यापार आफ्ना पिता मदत गर्न आउँछ। उनको कम्पनी मार्फत शिशु cradles पदोन्नति सुरु गरिएको छ। अर्को, तिनीहरूले पाङ्ग्रा थपियो, र उत्पादनहरु को दायरा व्हीलचेयर सार्थक भयो।
आफ्नो छोरा र छोरी पाउला को हातमा परिवार व्यापार को शासन को अर्को बीस वर्ष पछि। तिनीहरूले ठूलो प्रवाह को मुद्दा मा तिनीहरूलाई राख्दै, यस वाहनो र अन्य सामान विशेष ध्यान।
1996 मा, नातिनातिनी पाउला Hauck, उत्पादन मा नयाँ मोडेल जो शुरू को हात मा व्यापार को व्यवस्थापन। तिनीहरूमध्ये - जोडाहरू लागि विश्वव्यापी पैदल विकल्प र canes र Hauck घुमक्कड।
आधुनिक समयमा परिवार व्यापार परिवारको Hauck विकास
Joerg Feiler कम्पनी धन्यवाद थप र थप लोकप्रिय र चिन्न पनि भएको छ। 2002 नयाँ परिवार Hauck ब्रान्ड I'coo, खरीददारों को सबै भन्दा विलायक श्रेणी लागि डिजाइन गरिएको छ जो को सुरूवात द्वारा चिन्ह लगाइएको थियो। यो माथि ब्रान्ड प्रिमियर-कोटी उत्पादन गर्छ।
कम्पनी को leitmotif नवीन प्रविधि र आश्चर्यजनक डिजाइन को जडान छ। डिजाइनर नेदरल्यान्ड मा स्थित हो, र केवल एक दुई पटक महिना, तिनीहरूले व्यवस्थापन गर्न आफ्नो नवीनतम घटनाहरु प्रदर्शन गर्न, जर्मनी भ्रमण गर्नुभएको थियो।
जोडाहरू, सार्वभौमिक, ट्रांसफार्मर, हिँड्ने लाठी, तिपहिया साइकिलें र Strollers Hauck लागि विकल्पहरू: खोजे-पछि र विश्वसनीय ब्रान्ड को उत्पादन दायरा निम्न प्रजाति हुन्छन्। सकारात्मक अवस्थामा को भारी संख्या मा विकल्पहरू प्रत्येक समीक्षा। र गुणस्तर र उपस्थिति को सान्दर्भिक युरोपेली स्तर यो सबै धन्यवाद।
एक प्रमुख उदाहरण विभिन्न रंग मा प्रस्तुत 10 मोडेल छ जो पहुँच विश्वव्यापी को एक सेट, हुनेछ। यो विविधता बीच, आमाबाबुले तपाईँको लिङ्कमा घुमक्कड चयन गर्न सक्षम हुनेछ।
Strollers Hauck: समीक्षा
एउटा लेख यस्तो यसको Lightness गर्न छोराछोरीको परिवहन धन्यवाद को एक उत्कृष्ट विकल्प, खाट को लम्बाइ, सीट बेल्ट सजिलो र हेर्दै विन्डो हुन मानिन्छ। ठूलो प्लस strollers Hauck नवजात शिशुहरु देखि लिएर, विभिन्न उमेर समूहका बालबालिकाको लागि बनाएको छ। यो अवधिमा मेरो आमा सामना गर्न यातायातका उनको नयाँ हालतमा लागि सबैभन्दा कठिन कुरा समयमा।
यो मोडेल को लाभ जो तपाईं कुनै पनि एलिभेटर वा स्टोर ढोका पारित गर्न अनुमति दिन्छ धेरै स्टाइलिश र आधुनिक डिजाइन, maneuverability र एकदम साँघुरो र संकुचित wheelbase छ। घुमक्कड एकदम विशाल र मूल लागि झोला। सानातिना दोष छ जो औसत भन्दा taller छन् आमाबाबुको लागि धेरै सुविधाजनक unregulated कम पकड, मानिन्छ।
मोडेल, वर्णन, निर्माता र समीक्षा एक समीक्षा: केटा को लागि4वर्ष देखि साइकल बच्चाहरु
प्रभावकारी तरिका, रोचक विचार र सिफारिसहरू: रंग भेद छोराछोरीलाई कसरी सिकाउन
लक्षण रोग पत्ता लगाउन मदत गर्न सक्छ कि: Mumps एक बच्चा छ
कीव मा kindergartens: लामबद्ध समीक्षा
Buggies Maclaren: समीक्षा, वर्णन, विनिर्देशों र मालिकको समीक्षा
हामी बुझ्न, एक बच्चा बोल्न सुरु जसमा उमेर
गर्भनिरोधक गोलियां - प्रभावकारिता र स्वास्थ्य
सुरक्षा सिलाई गर्दा। नियम कार्यप्रवाह
क्राइमन रिसोर्ट्स स्विमिंग पूल संग "सबै समावेशी"। Crimea मा आराम
Macromedia उद्यम र यसको कारक
आईफोन 5s भने के काम बटन "घर" गर्छ? कारण, प्रतिस्थापन बटन
नोटबुक को औसत जीवनकालमा। नोटबुक को जीवनकालमा कसरी वृद्धि गर्न?
मरम्मत बजेट कसरी गर्ने?
Mammon - यो के हो?